Kusale enkundleni abasolwa abane kudutshulwana namaphoyisa | News24
Kusale enkundleni abasolwa abane kudutshulwana namaphoyisa
Johannesburg – Abavukuzi abathathu abangekho emthethweni, abaziwa ngozama-zama, badutshulwe bashona, kwaboshwa abanye abangu-14 kulandela isigameko sokudubulana namaphoyisa eBoksburg e-East Rand ngoMsombuluko ekuseni, kusho amaphoyisa eGauteng.
Kuphinde kwashona omunye umuntu wesilisa wesine, kodwa yena kusaphenywa ukuthi ushone kanjani.
Okhulumela amaphoyisa uLieutenant Colonel Lungelo Dlamini uthi amaphoyisa kanye nakaMasipala waseKurhuleni Metro Police (EMPD) abencinzwe indlebe ngabesilisa ebebehlome bezingovolo ngase-mijondolo yase-Angelo eBoksburg.
Uthi kubenokudubulana phakathi kwabasolwa namaphoyisa ngemuva kokuhlangana nabasolwa.
OLUNYE UDABA: Uthi usephaphele umculi obedla izidakamizwa
“Awekho amaphoyisa athole ukulimala kulesi sigameko,” kusho uDlamini.
Uthi bathathu abavukuzi abangekho emthethweni abadutshulwe bashona, kanti kungenzeka ukuthi owesine ubulawe ukwethuka.
"Amaphoyisa azokwazi kahle ukuthi ubulawe yini uma sekuphothuliwe ukuhlolwa kwesidumbu.”
Uthe amaphoyisa ashaqe izibhamu ezinhlanu kanye neziqhumane.